Worklọ ọrụ na-emepụta akwụkwọ, ndị na - ebunye ya - China
Product Okwu Mmalite Luowen 120 Steel Frame Formwork System tumadi mejupụtara ígwè etiti, plywood panel, scaffold mgbodo, coupler, ụgwọ waler, tie mkpanaka, eweli hookformwork, ígwè mwekota na sere-push prop, wdg 1. The ígwè etiti formwork bụ 18mm ọkpụrụkpụ plywood kpuchie na oghere nchara. 2. Okpokoro siri ike nke ukwuu, ụdị mpempe akwụkwọ mgbidi ahụ nwere ike iburu 60KN / m2 n'akụkụ mpụta ka kọlụm ahụ nwere ike ibu 80 KN / m2 3. Dịka usoro nhazi, ọ na-agbanwe ịgbakọta, woo ...
Nkọwapụta 1. Ibu ibu: Ihe dị ka 15KG / Square Mita 2. Ihe: PP + eriri eriri + Nilon 3. Nhazi: Panels,, njikwa 4. Resued: ihe karịrị 100 ugboro 5.Eco-friendly: Ee 6. Igwe nrụrụ na-adịghị mma: N'elu 150 ogo Celsius 7. Achịkọta ma gbasasịa: Mfe na ngwa ngwa 8.Certification: CNAS Test 2.Column Size: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm Panel height: 750mm 3.Material and Structure 1.Material: PP + glass fibers + Nilon 2. Nhazi ： ogwe, nkuku, aka na ngwa 4.Feature 1. Ogologo ndụ & ...
Nkọwa: 1. Ibu ibu: Ihe dị ka 15KG / Square Mita 2. Ihe: PP + eriri igwe, na njikwa Nilon 3. Nhazi: Panels, nkuku, aka na ngwa 5. Resued: over 100 times 6. Thermal deformation okpomọkụ: N'elu 150 ogo Celsius 7. Ezukọta ma gbasasịa: Mfe na ngwa ngwa 8. Asambodo: CNAS Ule Nkeji: Site na 200 * 200mm ruo 600 * 600mm, nha dị ka eserese n'okpuru: Ihe na Nhazi 1.Material: PP + fibers glass 2.Structure ： pan , nkuku, aka na ngwa Njirimara 1.Long ...
Berdị osisi ndị a na-akpụ akpụ dị larịị bụ nke plywood, osisi na walingng. Idozi plywood na ogwe osisi site na ịpị kposara jikọọ ogwe osisi na nchara waling site na nkwekọ Flange ọ dị mfe ịgbakọta, gbasasịa ma gbanwee na saịtị. Ọ dị nfe ma dị mfe maka iwu na njem. Ihe owuwu a dịkwa ezigbo mma na gburugburu ebe obibi. Plywood nwere arụmọrụ zuru oke. Plywood nwere ezigbo ikuku ikuku na mmiri absorbability, emechara ...
Plastic square kọlụm formwork
Anyị ụlọ ọrụ mepụtara ọhụrụ ngwaahịa, p ogologo iko eriri mejupụtara ewu formwork, iji polypropylene dị ka isi ihe onwunwe, iko eriri mesikwuru ọtụtụ ihe mejupụtara, na ebu ịpị n'ime shapes. The formwork usoro mejupụtara 65 ọkpụrụkpụ ọkọlọtọ formwork na 65 aluminum ekara formwork. Enwere ike iji ya na njikọ njikọta dị iche iche iji nagide ibu ọrụ dị iche iche. Obere ego na ọrụ dị mfe bụ uru kasịnụ nke pp ogologo iko ...
ABS FORBỌCH FOR AKW ADKWỌ AKWMKWỌ AKW :KWỌ: 1.LIGHT oghere ndị na-enwu ọkụ dị nchebe, dị mfe iji ma rụpụta ihe. Ọ bụ eziokwu na ibuli ngwa ọrụ dị arọ ugboro ugboro na-akpata ike ọgwụgwụ na mmerụ ahụ. Zhongming plastic formwork na-eri na nkezi 17 n'arọ / m2 na-enweghị otu mmewere arọ karịa 13 n'arọ: nke a pụtara na usoro ihe niile nwere ike iji aka mgbe niile, n'ọnọdụ ọ bụla. Ọrụ Crane abụghị ihe ọzọ, na-enye saịtị owuwu ihe mgbanwe dị ukwuu na-enweghị nkwekọrịta ọ bụla na ahụike na nchekwa 2.F ...
1.Product Introduction Aha zuru oke nke 63 Steel Frame Formwork System bụ 63 Steel Frame Plywood Mee-elu Formwork System, isi ya dị elu ma elu ya dị larịị, enwere ike ịkwado ma kesaa kpamkpam ma ọ bụ iche iche 2.Product Details 1.Thickness: Oghere Plywood 63mm: 12mm 2.weight ： 30kg / m2. 3.Surface ọgwụgwọ: agba spraying 4.reused: banyere ugboro 50 5. Nsogbu elu: 30-40 KN / m2. 6.Model Number: LWSF1063 7.Material: Steel Q235 3.Product Atụmatụ 1.Cost azọpụta 1) mfe ezukọ, melite na r ...
1.Product Introduction ： Luowen ọhụrụ 63.5 Steel Frame Formwork System bụ tumadi mejupụtara ígwè etiti, plywood panel, scaffold mgbodo, coupler, ụgwọ waler, tie mkpanaka, eweli nko, ígwè mwekota na sere-push prop, wdg The kọlụm formwork enwere ike ịgbakọta tupu oge eruo na ala ma ọ bụ zere saịtị ndị dị mgbagwoju anya. Jiri akụrụngwa tinye ya na ebe a na-ewu ihe ma wụsa kọlụm kọlụm. Mgbe etinyere ụdị ahụ mgbe emechara ya, ọ dịghị mkpa ịhapụ kpamkpam ...
Okwu Mmalite ： Aluminium na -emepụta ihe na-ewu ewu n'ihi na ọ dị mfe ma nwee ezigbo ike. Ọ na-achọ obere nkwado na agbatị. Ngwakọta usoro aluminom gụnyere mgbidi, ogidi, ogidi, efere, ndebiri na ogwe osisi. A na-eji buckles raara onwe ya nye jikọọ ndebiri. Enwere ike ịmebido usoro ihe eji eme ihe na mbido. Nkọwapụta ọkọlọtọ nke template mgbidi bụ 100mm-450mm X 1800mm-2400mm. Specificdị nkọwapụta ọkọlọtọ nke ndebiri ụlọ bụ 600 ...
Aha: Ihe nkiri Plywood Ihu: 1220x2440mm, 1250x2500mm ETC ọkpụrụkpụ: 12/15 / 18mm ETC Isi: Poplar, Eucalyptus, hardwood, combi Glue: MR, MELAMINE, WBP Ojiji: Nrụpụta, ngwugwu Mpụga mpụga: pallets ma ọ bụ katọn Formwork / shuttering bụ ụdị ojiji nke plywood. Formwork plywood pụkwara ịkpọ Shuttering Plywood. Film ihu plywood / MDO ihu plywood / Wood mkpuchi ihu plywood ike niile ga-eji dị ka Workdị Work. Na mama maka Formwork plywood bụ WBP mama. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ akụ na ụba ...
Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Metal Cuplock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Ringlock Scaffolding mgbodo, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding,